Amanqaku kaJoe Andrews Martech Zone |
Amanqaku ngu UJoe Andrews
UJoe Andrews yi-VP yeMveliso kunye noThengiso lweSisombululo e NgaphakathiBukela Kwaye uqhuba imali njengengeniso yesigqeba sentengiso ngokukhula okuphezulu, iinkampani zetekhnoloji eziphazamisayo iminyaka engama-20 +. Kwi-InsideView, uJoe ukhokela isicwangciso-qhinga sentengiso sehlabathi, ekubekweni nasekumiliselweni kweemveliso ezintsha kunye namacandelo entengiso. Ngaphambili uJoe wayebambe izikhundla zobunkokeli kwintengiso eZuora, VMware, Intuit kunye neMarket Inc. (inkampani yeD&B). Ungamlandela uJoe Twitter kwaye LinkedIn.
Amanyathelo ama-4 okuPhucula ukuGxila kwiNtengiso kwakho kwi-2019
NgoLwesine, Aprili 4, 2019 NgoLwesine, Aprili 4, 2019 UJoe Andrews
Njengoko sinyukela kwi-2019 ephumeleleyo, isihloko esinye esiphakamileyo kwengqondo kwiintengiso ezininzi ze-B2B kunye neenkokheli zentengiso endikhe ndathetha nazo sisicwangciso-qhinga sabo sokuya kwintengiso. Into ebilisa abaphathi abaninzi kukuba ngaba inkampani yabo ijolise kumacandelo emarike afanelekileyo kunye nokuba bakulungele kangakanani ukwenza isicwangciso sabo. Kutheni le nto ibalulekile? Ukuba nesicwangciso esomeleleyo sokuya kwintengiso kuhambelana kakhulu nokusebenza kwengeniso. Kuvavanyo lwethu lokugqibela olungama-500